Zvose pamusoro peMelanotan-II / MT2
2. Melanotan-II Inowanikwa mhinduro
3. Sei Melanotan-II yakakurumbira?
4. Ko Melanotan-II inotakura chero njodzi here?
5. Ndinogona sei kuvhara maonero akanaka eMelanotan-II?
6. Shandisai Melanotan-II chinyorwa chinobva paIndaneti
Melanotan II, alpha-Melanocyte inokurudzira hormone, Melanotan peptid, kana kuti MSH ishanduko yakasiyana-siyana yepanyama peptide hormone iyo inokonzera melanogenesis (imwe nzira inokonzera kupenya kweganda) mumuviri.
Iyo yakagadzirwa uye injectable peptide hormone inowanzoshandiswa pakunatsiridza hutano hwepabonde uye kuchenesa ganda reganda. Chirwere ichi chiri pakati pemapeptiji epamutemo anotengeswa, akatengeswa mufomu yeupfu iyo inozogadziriswa zvakare nokuda kwejekesti inopinza.
Melanotan II yakatanga kugadzirwa muC1990s paYunivhesiti yeArizona. Akarehwa nedermatologist anozivikanwa Norman Levine, boka rekutsvakurudza rakanga riri shure kwekugadzirwa kwemishonga yakashandiswa matatya kuti aedze kubudirira uye kuchengeteka kwehomoni inonzi Alpha MSH isati yaishandisa kune vanhu. Iyo hormone inokonzera kusvibiswa kwezvimedu zvematatya anoshandiswa mukuedza.
Pakusimbisa kubudirira kwaAlfa MSH mune ganda rinopisa ganda reganda, vakashandura Melanotan II peptidi nenzira inenge iine ushamwari kumuviri wemunhu uye inoiisa kuburikidza nemuedzo wekliniki. Panguva yekuedzwa, mumwe wevanhu vainge vatora mishonga iyi yakashumirwa kuna Levine kuti akanga achiona erections pakarepo.
Kutevera mitemo yakadai, boka rekutsvakurudza rakawanawo imwe kubudirira kusvika pakuona Melanotan-II inobatsira inoshushikana nekuwana Bremelanotide (PT-141), iyo dysfunction-yakatarisa yakatorwa kubva pamushonga. Ose maviri Melanotan II peptide uye Bremelanotide akatenderwa uye kupihwa rezenisi kutengeswa uye kushandiswa nemakambani ebiotechnology kukurudziro inogona kuitika mumishonga inokosha mishonga.
Melanotan II inoshandisa kuburikidza mamwe maitiro e-melanocortin, zvichiita kuti kucheneswa kweganda kuwedzere, kuwedzerwa kwepabonde libido, zviri nani kuva nemasabolism uye kuderedza chido chekudya. Mune chidzidzo chakaitwa kuti chiongorore kushandiswa kweMelanotan 2 pakudya kwezvokudya, zvakaonekwa kuti peptide hormone yakashandura central melanocortin (MC) apo yaidyiswa ichiita uye inodyiswa kumakonzo.
Ive mishonga yakashandiswa mukuedza iyi yakaderedza hutundu hwemuviri uye vecera adipose tishu zvichienderana nekurapa kwemazuva matanhatu neMeanotan peptide. Uyezve, iyo inotungamirirwa kubudiswa kwemakonzo e caloric kudya.
Zvakawanikwa ndezviratidzo zvakajeka kuti Melanotan peptide inogona kubatsira vanhu vanoda kutsvaga kurema, kunyanya kuoma uye kuwandisa, kuderedza ma carbohydrate avo uye kukora koriori.
2. Melanotan-II Inogumira mhinduro: Melanotan-II isati yasvika uye shure
Ngatitangei kutarisa kuongororwa kweMelanotan-II yakapiwa nevanhu vakashandisa MT2 (121062-08-6).
Tammy: Basa rangu rinosanganisira kupedza nguva yakawanda kunze uye pane imwe nguva, ndakasangana nekupisa kwezuva. Ndakanga ndisingafari neganda rangu rakakanganiswa randakaedza zvese zvigadzirwa zvose zvaifunga kuti zvinopa zuva kudzivirirwa asi hapana kana mumwe wavo akandipa mitsva yandaida. Ini ndakazopedzisira ndaziviswa kuMAT2 uye mhinduro dzave dzakashamisa. Ini zvino ndave neruvara runenge risiri runaka chete asiwo runopesana nekunogona kuparadza zuva.
Chris: Zvinonzwisisika, ini ndiri mvura yakasvibirira ine ganda rinopenya uye rinoshungurudza. Zvisinei, kunyange zvazvo ndakanga ndisingafari nekutarisa kwangu uye kukwirira kwandakanga ndava kupera zuva, ndakange ndichizeza kushandiswa kwekugadzira zvinhu. Rimwe zuva, ndakasarudza kutarisana nemusoro wepamusoro! Pashure pezvose, upenyu hupfupi kwazvo kuti urege kunzwa usiri kukwana. Ndakasarudza yava nguva yekuti Melanotan buy ndokuenda kwairi musi iwoyo mushure mebasa. Ichi ndicho chimwe chezvisarudzo zvakanakisisa zvandakamboita muupenyu hwangu hwose. Fembera chii..! Ndine tani yakasvibirira mushure mushure mokunge nhanho nhanhatu dzashanyira. Handikwanisi kutenda. Ndave ndichiri kushandisa izvo zvechitendero kubva ipapo uye ndisingambozvidemba zvese.
Laura: Ndinongoda zvinhu izvi. Pamusoro pevheti yepamutemo yekutengesa yandakamboshandisa, ndiyo chete Melanotan-II iyo yakandipa izvo zvandaitsvaga-tani yakaita uye yakareba kwenguva refu. Ndinononoka kamwechete pavhiki uye somugumisiro, ndinozvikudza pamusoro peganda rangu rinoshamisa. Inonyanya kuzivikanwa neotosacic Fasoracetam: inotipa chii?
Kusiyana nepakutanga apo kunyange ndakatonhora zuva kunyange mushure mekunge zvishoma zvishoma zuva, zuva ranhasi ganda rangu rakanyanya kusagadzikana panyaya dzakadaro. Iyo chete Melanotan-II dambudziko randakaona nderekunyadzisa mukati mekutanga kwemazuva ekushandiswa, asi nyaya yacho yakaenda nenguva. Kana iwe uri munhu akachena chaizvo uye unoda kuva nekodzero yakanaka yepasi, ndingakukurudzira kuti uedze chigadzirwa ichi.
Mercy L: Ndaigara ndichiona vasikana vane tani yakaita nani kupfuura ini. Ndakanga ndichitya kushandisa zvimwe zvigadzirwa zvemucheka pamusika sezvo paiva nevakawanda vakataura zviitiko zvekukuvadza kwakanyanya. Ndine ushingi hwokushandisa MT2 mushure mekuona kuti yakashandura sei shamwari yangu.
Pandakatanga kuishandisa, ndakashamisika kuziva kuti maikirini aMelanotan-II akanga asinganzwisisiki sezvandakanga ndafunga sokuti nhovo yakashandiswa yakanyanya kwazvo. Ini ndinozviuraya ini 1 mg yemishonga yehomoni mumumhino kwemazuva maviri uye ini ndisinganzwisisi kurwadziwa kwetsono. Kuchera nyaya yakareba kwenguva pfupi, ndinoda zvinhu zvose pamusoro pechigadzirwa ichi nokuti chakapa ganda rangu rondedzero yangu. Sezvo zvakadaro, ndinofara kuziva kuti ndakatamisa imwe danho kubva kune kenza yeganda.
Salome Clinton: Kubva kuIrish, kanda rangu rinowanzova rakachena kwazvo. Ndisati ndawana nekushandisa Melanotan peptide, ndaiwanzoona kupisa kwezuva nguva dzose yezhizha. Asi zvinhu zvakashandura zvakanyanya nguva apo ini ndakatanga kuwana majojo eMelanotan-II. Tani yeMelanotan-II isati yasvika uye shure kwechando yakafanana. Handityi mhedzisi zvakare nokuti chigadzirwa ichi chinopa ganda rangu kuchengetedza rinofanira kugara risina ruvara gore rese. Icho chigadzirwa chandinokwanisa kutaurira kune vamwe vanhu vanoda kuwedzera tani yakanaka paganda ravo.
Tony: Nyaya yangu inonakidza. Pandakachinja 40, libido yangu yakaderera zvikuru, zvichida nekuda kworudzi rwebasa randakanga ndatanga kuita. Ndakapedza chikamu chakanaka chenguva yangu, uye izvi zvakaguma nekukuvadza kwakakomba kweganda rangu nekuda kwekuwedzera kwemaira emusi.
Pandakanga ndava kufambisa paInternet, ndakagumbatira pamiriri pamusoro peMelanotan-II Makomborero. Ndakashamisika kuona kuti pakanga pane chirwere chinogona kuvandudza libido yangu uye kupa chikopa changu UV kudzivirirwa.
Sezvo ndashandisa chigadzirwa chemwedzi ye10, ndinogona kuvimba nechivimbo kubudirira kwayo mune zvose zviri zviviri. Ini nomudzimai wangu tinonakidzwa nerudo rwedu sezvatakaita mumavambo makumi maviri edu patinoroora uye ganda rangu rakanaka kwazvo. Ini handisati ndaona kupisa kwezuva zvisinei nokuti ndakatarirwa sei zuva.
Sandra: Yee! Ini zvino ndinogona kufara mazororo angu pamahombekombe ndisingadi kutya pamusoro pezuva, nokuda kweMelanotan-II Zvabuda. Ichi ndicho chinhu chandisina kumbofadzwa nemamwe makore shure nokuti zuva rakanga risina utsinye kune ganda rangu raidiwa.
Handikwanisi kuonga zvakakwana ani nani akauya nechikichi. Kunze kweganda rangu rinotarisa rima uye muviri wangu uri muchitarisiko chakaisvonaka. Ndakarega kurema kwepamusoro penguva yandakanga ndashandisa mushonga. Ndiri kufara chaizvo.
Raphael: Kana uine ganda rakachena kwazvo iwe unogona kunzwisisa zvakanaka kana ndikati kukanganisa kwezuva kunogona kukonzera iwe. kubva paudiki hwangu gore rakapfuura pandakazoziva nezveMAT2, ndaiwanzoedza zvakawanda zvandaigona kuti ndirege kudzivirira zuva uye ndakashandisa chimwe chinhu 50 + nekuda kwekudzivirira UV asi izvo hazvina kubatsira zvakawanda.
Pasinei nezvose izvi, pane imwe nguva, kunyanya munguva yezhizha, ndaizotora zvakashata nemazuva emvura. Gore rapera ndakaziva nezveMelanotan peptide uye ndinofara kutaura kuti izvi zvakandipa hupenyu hwangu zvakare. Yakandishandura ndarira mumasikati mashoma ekuishandisa.
Ndakanzwa vamwe vanhu vachinyunyuta nezvemigumisiro yeMelanotan-II asi havana kumbobvira vaona chero kunze kwekuwedzera libido iyo inowedzera kwandiri. Ini zvino ndinokwanisa kunakidzwa nemabasa ose kunze kwepanyika kunyange panguva iyo zuva rinopisa rinopisa nokuti ganda rangu rakachengetedzwa kubva pane zvinogona kukuvadza.
Khalid: Nguva dzose ndinoshandisa Melanotan-II kare uye shure mushure mekunge zuva richibuda uye rinoshandisa magic. Vanhu vanondiziva vanokwanisa kunzwisisa kuti zvinotyisa sei ganda rangu raive riripo panguva yezhizha nekuda kwekukuvara kwezuva asi ikozvino ndicho chinhu chekare.
Ndinodedera neganda rakasvibiswa (iro rakanga rave rakanyanyisa kwazvo). Kunze kweizvozvo, ndakaona kuti libido yangu yakawedzera mashoma uye mumwe wangu haasisina kunyunyuta pamusoro pokusagutsikana kwepabonde. Ndinonyatsokurudzira chigadzirwa.
3. Sei Melanotan-II yakakurumbira? / Melanotan-II Makomborero
Muhuwandu hwevamwe vanhu vanoedza kuderedza peptides yekutengesa, kunyanya Melanotan-II, uye kudzivisa vanhu kuti vasashandise, vanhu vazhinji vasina ruvara rweguru uye vane Melanotan supplement havagoni kuramba vakanyarara. Ivo vanogutsikana nemigumisiro yeMelanotan-II uye vanoramba vachirumbidza mushonga kune vamwe. Somugumisiro, kufanirwa kwekuwedzera kweMelanotan kunowedzera zuva nezuva.
Mushumo wakabudiswa ne BBC mu2009 wakaratidza kuti mazana evanhu vakanga vashanyira nhanhatu nhaurirano dzengano munguva yakareba kwemwedzi inoverengeka kuti iwane siriniti yekugadzirisa zvakakodzera Melanotan dosages. Mune 2010, Norwegian Pharmacy Association yakashuma kuti zviuru zvemiromo zvakapiwa kune vanhu vaida mishonga yeMelanotan-II. Mhuri huru yeMelanotan-II inosanganisira ganda rakasviba, kuwedzera libido uye kurasikirwa kwemafuta.
★ Ganda rima
Kuva nechephena ganda harisi chinhu icho vanhu vakawanda vanoita sechinhu chinonyanya kunetseka nekupisa kwezuva uye kenza yeganda. Nenguva isipi, kunyange kana iwe wakaberekwa une ganda rakachenesa, unogona kuwedzera imwe tani kwaro nokutora mishonga inogamuchirika kuti uwedzere ganda-rima rinogadzirwa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mitezo yeMelanotan-II haina kukodzera.
Kupindura Verdens, pepanhau reNorway, pamusoro pekuti akanga achishandisa majekiseni aMelanotan-II, Linn Connie Danielsen haana kuvhara mazwi ake pamusoro peganda rake reMelanotan dema. Akataura kuti mishonga yehomoni inomupa tani yakadzika uye yakareba gore rose uye kuti aive akazvikudza zvikuru nekuonekwa kwake. Akawedzera kuti mishonga yehomoni inoderedza kushungurudzika kwemaitiro ezuva rakawanda rinorambidzwa munguva yechando.
Pane zvitatu zvinobudirira zveMelanotan-II, asi chikuru ndeyokwanisa kubvisa chero ruvara rweganda zvisinei nokuti munhu ane makore akadini.
Kana ukasave wakagadzikana nehutachiona hwemuvara wako wechena uye unoda kuhupa tani yakawedzerwa, unofanirwa kuziva ruvara rweganda rako maererano neFitzpatrick scale usati watanga rwendo rwekuva neganda reMelanotan. Kuziva ganda rako rinobatsira pakugadzirisa mizinga yakakwana yeMelanotan yako yega yega yeganda.
Zvakakosha kuziva kuti vanhu vari kumusoro kweFitzpatrick scale spectrum (zvikurukuru mazita 1, 2 uye 3) ndivo ndivo vanogona kuwana zvakanakisisa uye zvinongoramba zviri nyore kuchengeta ganda reMananotan munguva shomanana kana ichienzaniswa nevamwe .
Kana ganda rako rine zviduku zvitsvuku zvemavara (freckles), migumisiro yeMelanotan-II ichakubatsira iwe kuwana ganda rakafanana nerima kana iwe ukatora mushonga wacho zvakakodzera. Nokufamba kwenguva, iwe uchaona kuvhara uye zvoga zveganda zvinosviba. Pakupedzisira, iwe uchava nehope yako yeganda inzwi.
Zvakakosha kuti iwe uchengete mupfungwa kuti Melanotan ganda renyama Iko kunoguma kwenguva yakareba kana ichienzaniswa nean tan. Zvinonzwisisika, kana iwe uine chiedza chezuva, ganda rako rinosviba rinosviba pamusana pekugadzirwa kwemarara kunodzivirira hutete pasi peganda rako (hypodermis) kubva pane zvinogona kuparadza mazuva. Saka, tani inoita senhoo.
Kunyange zvakadaro, kana iwe uine ganda rakachena kwazvo, unoziva kuti ganda rako rinorasikirwa nekarani iro rinowanikwa nekuda kwechiedza chezuva rinongopedza kwemavhiki mashomanana, kunyanya rimwe chete kana maviri, kana iwe ukarega kuonekwa nezuva. Mushure mezvose, ganda harifaniri kuwedzera kudzivirirwa (melanin) sezvo pasina mazuva ekukuvadza. Ndizvo zvinotsanangurira kuti nei iwe uchichena chaizvo / chiedza mukati megore rechando kana kana iwe ukagara mumba.
Ukuwo, rumwe ruvara rweMelanotan runobva kuTan peptide rinowanzotora nguva yakareba kupfuura tan. Inonyanya kupedzisira kwemwedzi imwe chete apo iwe unopedzisira usati wanyatsoona zuva. A Melanotan kutenga uye kushandisa ndezvose zvaunoda kuti ugare wakanaka nehuni rakanyatsoputika pasinei nenguva inowanikwa.
Sezvakambotaurwa, ganda rakachena kwazvo rinopenya rinonyanya kunetseka nekenza kupfuura yakanyatsonaka. Tichifunga nezvengozi, chinangwa chekutanga chekugadzira Melanotan II chaiva chokudzivirira kana kuderedza ngozi dzekenza yeganda nekukonzera kuwedzera kwekubudisa maranin. Semaglutide Migumisiro Sega Peptide? Kwete, Zvakawanda Kupfuura Izvi!
Kungofanana nemamwe mapepadi epamutemo anotengeswa, apo iwe unotora kuwedzera kweMelanotan, inokurudzira muviri wako kuti uite melanin pachikwata chepamusoro chinoshamisa kupfuura chinowanzoitika. Sezvo melanin ndiyo inonyanya kuisa ruvara rweganda rako, kuwedzerwa kwekugadzirwa kunoendesa kune ganda rakasviba.
Vakawanda vemafupa vane mvere dzisina ruvara havakwanisi kuwana ganda rinosviba kupfuura rakatsvuka. Ndicho chokwadi! Vanofanira kungosiya kukanganwa pamusoro pokusviba kupfuura izvozvo here?
Nokuti naMelanotan II, vanogona kuita kuti ganda ravo rive nerima sezvinobvira!
Somugumisiro wekuita uku, Melanotan II inokwanisa kuchengetedza zvakakwana ganda rako kubva pakusvibiswa kwekutadza uye kuderedza ngozi dzekenza.
Kana zvasvika kune nyaya dzebonde, dzakadai sekushomeka, vamwe vanhu vanofarira kuzvibata vega pane kuti vashanyire chiremba kuti vasanyara. Vamwe havana inishuwarenzi kana kuti havana inishuwarenzi yakaringana yekuwana masevhisi ehutano hwekubereka.
Mune zviitiko zvakadaro, mushonga wekuita zvepabonde unowedzera mushonga uyo usinganyatsodi mishonga yavanachiremba unouya mune zvakanaka. Melanotan dysfunction kuvandudza kugona ingori mashiripiti.
Kunze kwekupa zvakasikwa tsono mhedzisiro, Melanotan 2 zvakare inovandudza bonde irousal (libido). Varume nevakadzi vanoda kuwana hupenyu hwakanaka hwepabonde nevarume vavo vanogona kushandisa mushonga uyu. Iyo inopa varume vanotambura nekukasira kuomesa uye kusimba erection uye yakagadziridzwa kurara kwepabonde muvakadzi.
Ichi chinodhaka icho murume ane kusagadzikana anogona kutarisira kuti zvepabonde mafaro aanogona kuve nawo. Izvi zvinotsanangura zvakakwana chikonzero nei Melanotan kurapa kwemaitiro rubatsiro runowanikwa zvikuru pakati pemagumbeti akaita se "gay muscle" scene.
Mukuwedzera pakuwedzera kunaka kwekumiswa mumurume, Melanotan supplement inogonawo kumunakidzwa nekugadzirisa zvimwe zvishoma kuburikidza nekuderedza nguva yekuramba. Saka, kana iwe uchida kugadzirisa rudo uye ganda guru risina kunetseka nekenza yeganda uye zuva rinopisa, kushandisa Melanotan II kwakafanana nekuuraya shiri mbiri dzichishandisa ibwe rimwe.
Kunyange zvakadaro, chinangwa chikuru cheMelanotan 2 ndechekuchenesa ganda saka, kwete vese vanoshandisa iyo vachaona kuchinja mune zvepabonde dzavo. Mune mhaka iyo mishonga ine simba kune zvekuita zvepabonde, munhu wacho anonyanya kunzwa manzwiro e1 kumaawa 3 mushure mekuita. Mhinduro yacho inowedzera ku2 kumaawa 4.
Kana iwe usingadi kuona iyi Melanotan 2 isingatauriki, itai mishonga musati marara. Nokuita kudaro, mune zvakawanda semishonga inozoita kuti muviri wako uwedzere kukurudzira kuita zvepabonde, uropi hwako huchava hwakanyanya kurara kuti uite chiito chaidiwa saka, hauzonzwi wakasimudzwa. Kana zvisina kudaro, iwe unogona kungomirira kuitika uye uine nguva yakanaka nerudo rwako.
★ Melanotan-II kurasikirwa kukuru
Kunze kwekuwedzerwa libido, kumwe kusapindira kwekutakura kweM2 kurasikirwa kwakawanda.
Mune mutsara weMerianotan II kuongororwa kwakaitwa pamakonzo, vatsvakurudzi vakaona kuti mice dzakapiwa mishonga panguva yekudzidza dzakanga dzisinganyanyi kuwanda kwemavara anoona uye mashomanana ekupedzisira kwekuedzwa nguva kana ichienzanisa nezvakanga iripo kutungamirirwa kwechirwere. Ichi uchapupu hwakajeka hwe Melanotan-II kurasikirwa kukuru simba.
Nokudaro, kana iwe uri chigadzirwa ichi uye usinganzwisisi nehuremu hwako, Melanotan-II kurasikirwa kwemafuta kuchakusiya uchizunungusa nehupenyu hwakanaka uye hwakanaka. Melanotan-II mari inobhadhara zvikomborero zvaunowana kubva kumishonga chero bedzi iyo inobva kumunhu ane mbiri anonzi Melanotan-II.
Melanotan II inoderedza chishuwo chako uye ndiyo imwe nzira yekukubatsira kuti urege kurasikirwa nemafuta. Saka, kana iwe ukatora mushonga uyu, iwe unogona kudya zvishoma kudarika iwe wawakashandiswa uye izvi zvinobatsira kurasikirwa kwakawanda zvikuru. Inokubatsira kuti udzivise zvishuvo zvisingadikanwi uye unamatira kune kudya kwako pasina dambudziko
Chechipiri, kukwanisa kweMelanotan II kuderedza mafuta kusunungura mashoma kuwedzera muhutano hwekurema kwakaratidzwa. Imwe nzira iyo M2 inogona kukubatsira iwe kuderedza utano hwako.
Zvakanaka, hapana mararamiro emakore akawanda anonzi Melanotan-II ayo akambotaurwa kare. Kunyange zvakadaro, zvakawanikwa kuti vamwe vanhu vanogona kunge vaine zvimwe zvinokonzera kuvharwa kwepasipo panguva yekutanga mazana madhiranotan. Mimwe miviri yakawanda yeMelanotan-II inosanganisira kuora mwoyo kwakanyanya uye kupisa kunopisa muchiso.
Nenzira inofadza, izvi zvinokanganisika zvinowanzoita kuti zvive zvakasimba uye nguva sezvo muviri wako uchigadzirisa peptide.
Kana uchinge wanyanyisa kunetseka mushure meMalanotan doses, shandura dosing yako nguva kumaminitsi mashomanana usati warara. Kana izvozvo zvisingabatsiri, unogona kutora chaiyo anti-histamine chigadzirwa kweawa imwe usati watora Melanotan II kusvikira muviri wako ukashandiswa peptide. Kana iwe uchida anti-histamine chaiyo, iwe unogona kuenda zvakashata ne ginger root.
Imwe nzira yekutarisana neMaranotan-II zvinokonzerwa nekuparadzanisa danda rako razvino kusvika kumadiki madheji. Somuenzaniso, kana uri kutora chirongwa che 1mg, unogona kuchiparadzanisa kuva miviri ye0.5mg uye uvatore nenguva imwe mukati. Zvakakosha kuziva kuti migumisiro yemigumisiro inowedzera neyero; iyo yakasimudza muyero, iyo yakaoma zvikuru mibairo.
Zvinokurudzirwa kuti iwe uone kuti chinyorwa cheMelanotan-II ndechechokwadi usati watenga peptide sezvo kune vakawanda vanokwana Melanotan-II vatengesi. Nokuita kudaro, iwe uchava nechokwadi chokuti uri kushandisa mushonga chaiwo, kwete chimwe chinhu chinogona kupedzisa kuita zvinokuvadza kupfuura zvakanaka kune muviri wako.
▲ Kudonha kwechiso
Kubhururuka kwechiso kunowanikwa mukati memaminitsi e10 ekutora Melanotan II asi kunongogara kwechinguva chiduku, kazhinji pasi peawa. Zvisinei, haufaniri kushungurudzika zvakanyanya kana iwe ukaona sekukanganisa kwakanyanya kunowanzoenda kune vashoma vashoma Melanotan-II injections kamwe muviri wako unoshandiswa kumushonga.
▲ Ganda kubvongodza, kuputika kwepamuviri uye utachiona
Tichifunga kuti pane dzakasiyana-siyana paInternet Melanotan-II vatengesi, zviri nyore chaizvo kuwana Melanotan kutenga. Dambudziko rinouya kana iwe usingawani nzira yakarurama uye yakachengeteka pamusoro pokuti ungashandisa sei mushonga kana kana iwe ukundikana kuvatevera tsamba.
Melanotan 121062-08-6 inouya mufomu yeupfu uye inofanirwa kuyananiswa nemvura yakasviba musati majekesa. Nokudaro, kana mvura isina kuchena isingashandiswi, mushonga unopindwa muropa unogona kusvibiswa uye izvi zvinogona kutungamirira kune zvimwe zvinhu zvehutano zvakadai sehutachiona.
Kunze kwekuti, sirineni inoshandiswa inofanira kunge yakachena uye yakasvibiswa, zvimwe kusvibiswa kwepamuviri kana chirwere chinogona kuitika kune munhu anogamuchira mushonga. Uyewo, kana kushandisa zvinodhaka kusina kuitwa nomunhu ane ruzivo, zvinogona kukonzera ganda kukuvara.
Mimwe migumisiro yakawanda yemigumisiro yemigumisiro yeMelanotan-II inosanganisira:
Kazhinji, idzi migumisiro yemigumisiro inokonzerwa ne dosing nenzira yakakwirira kwazvo. Nokudaro, chimwe chezvasarudzo kuti udzivise kana kuvadzivisa ndechokusarudza mubairo wakaderera.
Uyewo, pane zvinokonzerwa neMalanotan-II migumisiro munguva yakareba miedzo uye inosanganisira zvimwe zvinokanganisika, kusviba kwemiromo uye kusvibiswa kwemashure.
Zvakakosha kuziva kuti iwe kuti uwane mhinduro dzakanakisisa dzeMelanotan; iwe unofanira kushandisa Melanotan-II sechirwere chinopfuurira. Chirwere chekutanga chinofanira kuteverwa nemirairo inotevera yeMalanotan yekuita chinangwa chekuchengetedza kusvikira iwe uchinge watora rondedzero yako yeganda rehope.
Kunze kwekudaro, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti hauna kutora zvishoma kana zvishoma zvidhiyo. Ingovhara chiyero chakanaka.
Tichifunga kuti MT2 inosvika sekuisa pfumbi yakasvibiswa mumhepo yakasviba, mumiti yakawanda yekushandiswa, unofanira kunge uchikwanisa kuigadzirisa zvakanaka kushandisa chiyero chakanaka nemvura isina mvura usati watonga. Melanotan peptide nokuda kwekushandisa iwe pachayo inotengeswa mu 10mg yakavharwa mukati me 3ml vial uye inofanira kudimbiswa ne 1ml kana 2ml yemvura yakashata.
Kana iwe usina chokwadi nezvekwanisi yako yekudzorera peptide zvakarurama, unogona kushandisa Lovemelanotan peptide calculator. Iwe unogonawo kushandisa shanduro yekuita chigadzirwa zvakanaka.
Kunyangwe kune nzira dzakasiyana-siyana dzekutungamirira Melanotan-II 121062-08-6 kusanganisira kupirisa (mapapiro emvura) uye kumedza (Melanotan kuwedzera mapiritsi), uye injection, iyo yekupedzisira (injection) ndiyo yakanakisisa. Iyo peptide mamolekemu muMelanotan peptide spray yakawandisa uye saka, zvakaoma kuti vapinde mukati memumakumbo emumvura.
Izvo zvakasiyana nemagetsi nzira iyo kuwandisa kwehuwandu hwechirwere ndeye 100%. Kana zvasvika pamapiritsi, ivowo havakwanisi kuva vakashanda sezvijoviso nekuda kwemakemikari ari mudumbu anoita kuti peptide isanyanya kushanda. SARM Zvinyorwa muHotel 10: SR9009 (1379686-30-2)
Kana iri nguva yako yokutanga shandisa Melanotan 2, zvinonzwisisika kuti unotanga nechepasi kwazvo, zvichida chero kupi zvako mukati mechikamu che 50 mcg kusvika ku 75 mcg uye owedzera zvishoma nezvishoma kubva ipapo nenguva iyo iwe uchitarisa kuti muviri wako unopindura sei. Sezvambotaurwa, kutanga pamwero mukuru kunowedzera mikana yekuwana chirwere cheMelanotan-II sekushungurudzika.
Uyezve, edza kuita kuti zvikamu zvekuchenesa zvive zvidzidzo zvishomanana semaminitsi kana maviri kana zvichidiwa mumazuva okutanga, mushure mekunge Melanotan achitsvaga kutaridzika kweganda riri nani. Izvi ndezvokuti kuchenesa kwenguva yakareba apo ganda rako rine maranin anowedzera huchawedzera kukanganisa kwako uye kupisa. Sezvo hutachiona hwema-melanin huchiwedzera pamusana peMeanotan ganda rakasviba, ganda richachengetedzwa zvakanyanya zvokuti rinenge risina kunetseka pakuputika uye kupisa kwezuva.
Kana ukangodzokorora MT2 kusvika pakurongedzwa kwakarurama, ikozvino yava nguva yekuitungamirira, basa raunoshandisa uchishandisa insulin sirin. Chimwe chinhu chamuchaona nezvechirwere ndechekuti haisi zviduku chete asi zvakajeka muIU (Internation Units). Kana iwe wakashandirwa meri, 100 IU yakaenzana ne1 ML. saka, kana iwe uchida kutarisira 0.3mls, iwe uchayera mushonga wacho kusvika ku 30 IU mararamiro mumutsara.
Ngationei zvino kuti jekiseni rinofanira kuitwa sei.
Iwe unogona kuvhara pepanari yeMelanotan pasi peganda (subcutaneous) kana kupinda musumbu (intramuscular); chero kupi zvako iwe unogona kusvika zvakanaka pamuviri wako. Svetesa ganda kubva musumbu uye ritevere kuti ribvumira shandi kuti ipinde mukati mehutema hweganda. MT2 inobva yanyura muropa uye inopararira zvakafanana mumuviri wako.
Sezvakangoita kune mamwe mapepadi epamutemo anotengeswa, kune vazhinji VaMelanotan-II vanotengesa paIndaneti uye pasina. Asi vose vanozvitengesa zvigadzirwa zvechokwadi uye vanoshandisa kodzero yakakodzera yaMelanotan-II mumutengo wavo here? Mhinduro yacho kwete.
Vamwe vari paIndaneti vaMelanotan-II vanotengesa vanotengesa Melanotan-II yakaipa pamatengo asingasviki kuti vaite peptide yekutengeserana yakawanda pamutengo wekukosha kwevatengi vanofanira kuwana kubva pamari yavo.
Mukudaro, zvakakosha kuti iwe ushingaira kusati wasarudza usati wasarudza chinyorwa cheMelanotan-II. Zvisinei, sezvo iwe usingave uine nguva yose yekuchera zvakadzama kusiyanisa pakati pezvinodhaka nevatengesi chaivo, tinoda kukuchengetedza dambudziko nekukuisa iwe Phcooker.com.
Phcooker.com ndechimwe chezvinhu zvakatendeseka Melanotan-II vatengesi. Kana iwe uchida kutenga Melanotan-II (121062-08-6) hauna kusununguka, iri bhuku reMelanotan-II rawakafukidza. Kunze kweiyo, iyi ndiyo yakanakisisa yeMelanotan-II chinyorwa chemakwikwi akawanda eMelanotan-II mari.
Wessells, H., Levine, N., Hadley, ME, Dorr, R., & Hruby, V. (2000). Melanocortin receior agonists, penile erection, uye chido chepabonde: kudzidza nevanhu naMelanotan II. Nhoroondo yepasi rose yekutsvaga kutsvaga, 12(S4), S74.
Evans-Brown, M., Dawson, RT, Chandler, M., & McVeigh, J. (2009). Kushandisa melanotan I uye II munharaunda yose.
Nelson, ME, Bryant, SM, & Aks, SE (2012). Chirwere cheMelanotan II chinokonzerwa nehutachiona hwehutachiona uye rhabdomyolysis. Clinical Toxicology, 50(10), 1169-1173.
Heijboer, AC, Van Den Hoek, AM, Pijl, H., Voshol, PJ, Havekes, LM, Romijn, JA, & Corssmit, EP (2005). Intracerebroventricular administration ye melanotan II inowedzera insulini senzwi rekushandiswa kweglucose mumakonzo. Diabetologia, 48(8), 1621-1626.
Breindahl, T., Evans-Brown, M., Hindersson, P., McVeigh, J., Bellis, M., Stensballe, A., & Kimergård, A. (2015). Kuzivikanwa uye kugadziriswa kweLC-UV-MS / MS ye-melanotan II yenyama yekugadzira zvinhu zvinotengeswa zvisiri pamutemo paInternet. Kuongorora zvinodhaka uye kuongorora, 7(2), 164-172.
Li, G., Zhang, Y., Wilsey, JT, & Scarpace, PJ (2004). Unabated anorexic uye yakawedzerwa thermogenic mhinduro ku melanotan II mukudya-induced yakawanda rats pasinei kuderedzwa melanocortin 3 uye 4 mutpor expression. Nyaya ye Endocrinology, 182(1), 123-132.
Ndakafonerwa webhusaiti iyi neukama hwangu. Handina chokwadi chekuti kana tsamba iyi yakanyorwa naye sekuti hapana mumwe munhu anoziva zvakadzama nezvedambudziko rangu. Unoshamisa!